ဖခငျဖွဈသူနဲ့ပတျသကျပွီး တသကျလုံး နောငျတရနတေော့မယျ့ အကွောငျးကို ဖှငျ့ဟလိုကျတဲ့ မွတျကသေီအောငျ | Popular
October 8, 2020 Popular
သရုပ်ဆောင် မြတ်ကေသီအောင် ရဲ့ဖခင် ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်မောင် လူကလေး ကွယ်လွန်တာ ၉နှစ် ၆လပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးရဲ့ သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရပုံတွေ၊ ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြဲနောင်တရနေတော့မယ့် အဖြစ်ကိုလည်း အခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ့်မိဘကို မချစ်တဲ့ သားသမီး သိပ်ရှားပါးမယ်ထင်ပါတယ်.မိဘတွေက အနစ်နာခံ ဒုက္ခခံပြီး ပြုစုစောက်ရှောက်ခဲ့လို့ ကိုယ်တွေ အသက်အရွယ်တခုရောက်တဲ့အခါမှာ အဆင်ပြေပြေ အလုပ်တခုလုပ်နိင်ခဲ့တယ်.ကိုယ်အနုပညာစလုပ်တော့ ကိုယ့် အဖေက ဇာတ်ပို့တယောက်အဖြစ်နဲ့ ဇာတ်ကားတွေအများကြီးရိုက်ထားပြီးနေပြီ.အဖေ့ ရုပ်ရှင်နံမည်က မောင်လူကလေးပေါ့.အနုပညာလောကထဲမှာ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ အဖေ့ကြောင့် ကိုယ်ဟာ မောင်လူကလေးသမီးဆိုပြီး လိုက်မိတ်ဆက်ဖို့ မလိုအောင် ကိုယ့်လောက ကလူတွေမြန်မြန်သိသွားကြတယ်.အဖေ့သမီးလို့ လောကထဲကလူတွေ သိသွားပြီးနောက်မှာ ကိုယ့်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတခုကိုစတင်ခဲ့တယ်.
ဘာလဲဆိုတော့….ဇာတ်ပို့တယောက်ရဲ့ သမီးဟာ ဘာမှ မဖြစ်ပဲနဲ့ အနုပညာလောကထဲကပြန်ထွက်သွားရတယ်ဆိုတာနဲ့ ဇတ်ပို့တယောက်ရဲ့သမီးဟာ ဘယ်တော့မှ မင်းသမီးတယောက်မဖြစ်နိင်ဘူးဆိုတာ မျိုး မဖြစ်ရအောင် ကြိုးစားခဲ့ရတယ်.ဒါဟာ အဖေတယောက် ဇာတ်ပို့ဆိုတဲ့ဘဝမှာ ဘယ်လောက်ပေးဆပ်အနစ်နာခံပြီး အနုပညာကို ကိုယ့်ထက်ပိုရူးသွပ်တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရလို့ပဲ.အကယ်ဒမီကို ကိုယ်ရချင်တာထက် အဖေက ကိုယ့်ကိုပိုရစေချင်တယ်.အဲ့တာကြောင့် ကားကြီးတွေရိုက်ခွင့်နည်းခဲ့ရတဲ့ကိုယ်ဟာ အခွင့်အရေးရတိုင်းကိုယ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့နေရာကို အမြဲစိတ်နစ်ပြီး ကြိုးစားခဲ့တယ်.ကိုယ့်ဘဝထဲကနေ အဖေထွက်သွားချိန်ဟာ အရမ်းစောလွန်းတယ်လို့ခုထိခံစားနေရသလို အဖေ့ကို ဆေးရုံစောစောတင်လိုက်ရင် ငါ့အဖေခုထိအသက်ရှင်နေအုန်းမယ်ထင်ပါတယ်.အောက်စီဂျင်ဗူးလေးတောင်ပေးမရှူလိုက်မိတဲ့နောင်တဟာ ကိုယ်ကျန်ခဲ့တဲ့သက်တမ်းမှာသေတဲ့အထိ ပါသွားပါပြီ.
အဖေမရှိတော့ပေမဲ့ အဖေချစ်တဲ့အနုပညာလောကထဲမှာ အခွင့်အရေး ရရင် ရသလို ခုထိ ကြိုးစားနေတုန်းပါ.ကံတရားလေးများ တခါလောက်ကောင်းခဲ့ရင် တတိယမြောက်အကယ်ဒမီလေးနဲ့ ထပ်ပြီးကျေးဇူးဆပ်ချင်ပါသေးတယ်အပါးရယ်.
၉နှစ်နဲ့ ၆လပြည့် အလွမ်း(ပြန်မတွေ့ရနိင်တဲ့အပြုံးတွေ)
သရုပျဆောငျ မွတျကသေီအောငျ ရဲ့ဖခငျ ဇာတျပို့သရုပျဆောငျမောငျ လူကလေး ကှယျလှနျတာ ၉နှဈ ၆လပွညျ့သှားခဲ့ပါပွီ။ ဇာတျပို့သရုပျဆောငျတဈဦးရဲ့ သမီးဖွဈတဲ့အတှကျမငျးသမီးတဈယောကျဖွဈလာဖို့ ကွိုးစားခဲ့ရပုံတှေ၊ ဖခငျနဲ့ပတျသကျပွီး အမွဲနောငျတရနတေော့မယျ့ အဖွဈကိုလညျး အခုလိုပွောပွခဲ့ပါတယျ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ ကိုယျ့မိဘကို မခဈြတဲ့ သားသမီး သိပျရှားပါးမယျထငျပါတယျ.မိဘတှကေ အနဈနာခံ ဒုက်ခခံပွီး ပွုစုစောကျရှောကျခဲ့လို့ ကိုယျတှေ အသကျအရှယျတခုရောကျတဲ့အခါမှာ အဆငျပွပွေေ အလုပျတခုလုပျနိငျခဲ့တယျ.ကိုယျအနုပညာစလုပျတော့ ကိုယျ့ အဖကေ ဇာတျပို့တယောကျအဖွဈနဲ့ ဇာတျကားတှအေမြားကွီးရိုကျထားပွီးနပွေီ.အဖေ့ ရုပျရှငျနံမညျက မောငျလူကလေးပေါ့.အနုပညာလောကထဲမှာ ပြျောပြျောနတေတျတဲ့ အဖကွေ့ောငျ့ ကိုယျဟာ မောငျလူကလေးသမီးဆိုပွီး လိုကျမိတျဆကျဖို့ မလိုအောငျ ကိုယျ့လောက ကလူတှမွေနျမွနျသိသှားကွတယျ.အဖသေ့မီးလို့ လောကထဲကလူတှေ သိသှားပွီးနောကျမှာ ကိုယျ့အတှကျစိနျချေါမှုတခုကိုစတငျခဲ့တယျ.
ဘာလဲဆိုတော့….ဇာတျပို့တယောကျရဲ့ သမီးဟာ ဘာမှ မဖွဈပဲနဲ့ အနုပညာလောကထဲကပွနျထှကျသှားရတယျဆိုတာနဲ့ ဇတျပို့တယောကျရဲ့သမီးဟာ ဘယျတော့မှ မငျးသမီးတယောကျမဖွဈနိငျဘူးဆိုတာ မြိုး မဖွဈရအောငျ ကွိုးစားခဲ့ရတယျ.ဒါဟာ အဖတေယောကျ ဇာတျပို့ဆိုတဲ့ဘဝမှာ ဘယျလောကျပေးဆပျအနဈနာခံပွီး အနုပညာကို ကိုယျ့ထကျပိုရူးသှပျတယျဆိုတာကိုသိလိုကျရလို့ပဲ.အကယျဒမီကို ကိုယျရခငျြတာထကျ အဖကေ ကိုယျ့ကိုပိုရစခေငျြတယျ.အဲ့တာကွောငျ့ ကားကွီးတှရေိုကျခှငျ့နညျးခဲ့ရတဲ့ကိုယျဟာ အခှငျ့အရေးရတိုငျးကိုယျလုပျခှငျ့ရတဲ့နရောကို အမွဲစိတျနဈပွီး ကွိုးစားခဲ့တယျ.ကိုယျ့ဘဝထဲကနေ အဖထှေကျသှားခြိနျဟာ အရမျးစောလှနျးတယျလို့ခုထိခံစားနရေသလို အဖကေို့ ဆေးရုံစောစောတငျလိုကျရငျ ငါ့အဖခေုထိအသကျရှငျနအေုနျးမယျထငျပါတယျ.အောကျစီဂငျြဗူးလေးတောငျပေးမရှူလိုကျမိတဲ့နောငျတဟာ ကိုယျကနျြခဲ့တဲ့သကျတမျးမှာသတေဲ့အထိ ပါသှားပါပွီ.
အဖမေရှိတော့ပမေဲ့ အဖခေဈြတဲ့အနုပညာလောကထဲမှာ အခှငျ့အရေး ရရငျ ရသလို ခုထိ ကွိုးစားနတေုနျးပါ.ကံတရားလေးမြား တခါလောကျကောငျးခဲ့ရငျ တတိယမွောကျအကယျဒမီလေးနဲ့ ထပျပွီးကြေးဇူးဆပျခငျြပါသေးတယျအပါးရယျ.
၉နှဈနဲ့ ၆လပွညျ့ အလှမျး(ပွနျမတှရေ့နိငျတဲ့အပွုံးတှေ)